Lufthansa Airbus A350-900 "Erfurt" dia ho lasa fiaramanidina fikarohana momba ny toetrandro
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Alemana » Lufthansa Airbus A350-900 "Erfurt" dia ho lasa fiaramanidina fikarohana momba ny toetrandro
Ny fiaramanidina lavitra-mahomby mahomby indrindra ataon'ny vondrona Lufthansa Group dia lasa mpanangona angon-drakitra ambonin'ny rahona
Ny famadihana ny fiaramanidina ho lasa fiaramanidina fikarohana momba ny toetrandro dia mametraka fanamby lehibe
Amin'ny dingana telo, ny "Erfurt" dia ho lasa laboratoara fikarohana manidina
Ny "Erfurt" dia antenaina hiainga avy any Munich amin'ny faran'ny 2021 ho an'ny sidina voalohany amin'ny serivisy amin'ny fikarohana toetrandro
Maminavina ny marim-potoana marimarina kokoa, mamakafaka kokoa ny fiovan'ny toetrandro, ary manadihady tsara kokoa ny fivoaran'izao tontolo izao. Ity no tanjon'ny fiaraha-miasa tokana manerantany eo amin'i Lufthansa sy ireo andrim-pikarohana marobe.
Ny famadihana ny fiaramanidina ho lasa fiaramanidina fikarohana momba ny toetrandro dia mametraka fanamby lehibe. Lufthansa nisafidy ny fiaramanidina lava indrindra maoderina sy ara-toekarena amin'ny fiaramanidina - Airbus A350-900 antsoina hoe "Erfurt" (fisoratana anarana D-AIXJ). Amin'ny dingana telo, ny "Erfurt" dia ho lasa laboratoara fikarohana manidina.
Tao amin'ny hangarin'i Lufthansa Technik any Malta, no nanatanterahana ny asa fanovana voalohany sy lehibe indrindra. Ny fanomanana dia natao ho an'ny rafi-pitantanana rivotra sarotra eto ambanin'ny kibo. Nanaraka izany ny andiana fampidirana fitsapana, izay niafara tamin'ny fanamarinana ny laboratoara fikarohana ny toetrandro milanja manodidina ny 1.6 taonina, ilay laboratoara fandrefesana CARIBIC. Ny fanafohezana CARIBIC dia midika hoe "Fiaramanidina sivily ho an'ny famotopotorana tsy tapaka ny habakabaka mifototra amin'ny fitoeran-java-maneno iray". Ity tetikasa ity dia ao anatin'ny kaontinanta fikarohana eropeana feno.
Ny "Erfurt" dia antenaina hiainga avy any Munich amin'ny faran'ny 2021 ho an'ny sidina voalohany amin'ny serivisy momba ny toetrandro, mirefy manodidina ny 100 ny gazy, aerosol ary paramètre cloud ao amin'ny faritra tropopause (amin'ny haavon'ny sivy ka hatramin'ny roa ambin'ny folo kilometatra). Lufthansa dia manao fanomezana lehibe amin'ny fikarohana ny toetrandro, izay afaka mampiasa ireo angona tsy manam-paharoa ireo hanombanana ny zava-bitan'ny maodelim-piainana sy ny toetr'andro ankehitriny ary noho izany ny heriny maminavina ny toetr'andro eto an-tany. Ny endri-javatra manokana: ny mari-pahaizana mifandraika amin'ny toetrandro dia azo soratana amin'ity haavo ity miaraka amin'ny fahamendrehana bebe kokoa sy ny famahana ara-potoana eny ambony fiaramanidina noho ny amin'ireo rafitra mifototra amin'ny satelita na mifototra amin'ny tany.
“Ny fanovana ny A350-900 'D-AIXJ' ho fiaramanidina mpikaroka momba ny toetrandro dia zavatra tena manokana ho anay. Nientanentana avy hatrany izahay momba ny drafitra hanohizana ny CARIBIC amin'ny karazana fiaramanidina tena mahomby. Amin'izany no ahafahantsika manohy manohana ny fikarohana ny toetrandro sy ny atmosfera amin'ny lahasa manandanja azy amin'ny zotra lavitra. Manampy anay izahay mba hahazoana antoka fa ny masontsivana manan-danja indrindra mifandraika amin'ny toetrandro dia angonina avy eo amin'io haavo io izay misy ny vokadratsin'ny trano fandraisam-bahiny ”, hoy i Annette Mann, Lehiben'ny andraikitry ny orinasa ao amin'ny Lufthansa Group. "Faly aho fa afaka mampihatra an'io tetik'asa be fatratra io miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka amintsika amin'ny fotoana voatanisa ary amin'izany dia mandray anjara amin'ny fanatsarana ireo maodelin'ny toetrandro ankehitriny."